FIQI oo bogaadiyay in lala xisaabtamo Cabdisiciid Muuse | KEYDMEDIA ENGLISH
FIQI oo bogaadiyay in lala xisaabtamo Cabdisiciid Muuse
Fiqi, wuxuu soo jeediyay in la sameeyo sharciyo ku aaddan arrimaha saamaynaya degaanka iyo xaalufintiisa, si looga badbaado saameynta taban ee dhirjaristu ku leedahay dalka, taasoo qeyb weyn ka qaadata abaara iyo rogrogadka waqti roobaadka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi, oo muddo ka mid ahaa mucaaradka Kooxii Farmaajo, ayaa bogaadiyay in lala xisaabtamo, Wasiirkii Arrimaha Dibadda ee shaqada laga joojiyay Cabdisiciid Muuse Cali.
Fiqi wuxuu sheegay, in geeda jarista, dhoofinta iyo qiil u raadinteeda intuba ay dabni qaran yihiin, wuxuuna xusay in macluusha dalka ka taagan iyo abaaruhuna yihiin astaan ka mid ah dhibaatooyinka ama saamaynta ay keeneyso dhir-jarista daran ee dalka ka socota.
Fiqi oo ka fal-celinayay waraaq ka soo baxday xafiiksa Hantidhowrka guud ee qaranka, oo ku socotay Xeer ilaaliyaha guud, kuna saabsan baaritaanno eedo dhuxul dhoofin oo loo heysto Cabdisiciid, ayaa taageero u muujiyay baaritaanna si weynna u bogaadiyay.
“In tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado ciddii falkaas ku lug yeelata ha ahaadaan ganacsato, gaadiid qaaday ama mas’uuliyiin dawladeed oo fududeeyey waa arrin u baahan bogaadin iyo garab istaag”. Ayuu yiri Axmed Macallin Fiqi.
RW Rooble, ayaa 24 May 2022, shaqada ka joojiyay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Cabdisiciid Muuse Cali, kadib markii ay ku caddaatay inuu fasaxay markab siday dhuxul si sharci darro ah looga dhoofiyay Soomaaliya oo ku xiran xeebaha dalka Cummaan.
Sidoo kale, xafiiska Hantidhowraha Qaranka iyo Hay'adaha amniga, ayuu ku amray in ay baaritaan ku sameeyaan falkan iyo sidii uu u dhacay ayna u gudbiyaan hay'daha garsoorka ee ku shaqada leh, si loola xisaabtamo Wasiirka Shaqada la joojiyay Cabdisiciid.